Tapha Kubbaa miilaa Awurooppaa ijoollee Afrikaatti keessaa ifa
Ebla 25, 2011
Awurooppaan biyya jaalalti kubbaa miilaa macheessite,Afrikaa gama Bahaa ammo fiigichaan hin dandahan,gama Dhiyaatii fi Kibbaa ammmoo kubbaa miilaatiin itti malataniiyyuu,Ivory Coast waan mataa baafachaa deemuutti jirti.Gara Asiyaa kana ammoo juudoo ykn kaaraatee irraa hin fuudhan.Ardiin cuftii waan beekamtuun qabdi.
Akkuma taateefuu yoo gara kubbaa miilaatti deebine,biyya Awurooppaa ta jaalatii kubbaa miilaa miila lafa hanqifte tana haga guddaan ijoollee Afrikaa bitanitti maqaa biyya tanaa addunyaatti beessisaa ufillee keessaan ifa.
Taphattooii dorgommii English Premier League-f jedhanii Afrikaa bitanii keessaa;obboleeyyan lamaan Yaayyaa Turee fi Kooloo Turee ka doolara miliyoona hedduutin Manchester Cityn bitatee seenaa hojjachumatti jirti.
Goolii Yaayya garee Manchester United irraa galche akka gareen Yaayyaa faan waan ganna 30 caalaa keessatti aragattee hin beenne argattu goote.
Gama kaaniin ammo dorgommii kubbaa miilaa Afrikaa ka ganna dhufuulleen ittuma jiranii mee.Qophii Ispoortii MP3 irraa caqasaa.
Koronaaf jecha Itiyoophiyaatti Maaskii ykn aguuggii fuulaa keeyyachuun dirqama:Ministera Fayyaa
Filannoo Itoophiyaatiif ji’a 5th hafe paartileen mormituu hagii tokko filannoof kurfoo jirra jedhan